09 Aprily 2015
Tanteraka soa aman-tsara ny Sabotsy 28 Mastsa teo tao amin'ny CGM Analakely ny ZARAFANAHY izay fanaon'ny Faribolana Sandrantra hizarana sehatra sy Antsa amin'ireo poeta sy mpanoratra tsy avy ao aminy.
Nafana ny sehatra niarahana tamin'izy 11 mianadahy teo an-kianjan'i Mero Kosiky sy Zazangaly ary Andriniela niaraka tamin'ireo Sandratra avy any amin'ny faritra toa an'i Ny Peniko (Sandratra Ambatondrazaka) sy Ezra S (Sandratra Toamasina). Niampy ireo efa hita fa feno traikefa dia Hemerson (poeta, mpanao hosodoko), Narilala Ravakinoro (poeta MPIZAKA STELARIM) sy Joey Aresoa (Madagaslam).
Tsy nandroaka ireo olona maro be tonga na efa hariva aza ny andro ny antsa miendrika hira noventesin'i Iriana Solevayn teo an-tsehatra, ary indrindra Ikaloyna Vony izay sady poeta no mpanao gazety ary fantatsika fa anisan'ny miandraikitra ny vondrona sy tranonkalan'ny Poetawebs
Ny antsa moa dia nielanelanin'ny tarika SAMMY tamin'ny feo mangan'izy telo mianadahy.
Isaorana ireo izay rehatra nitoto nahafotsy ary nahandro nahamasaka an'iny seho iny ary indrindra ireo mpijery izay tsy omby trano. Mankasitaka dia amin'ny herin-taona indray ny ZARAFANAHY manaraka.
Tatitra : Mina Ilarion
Sary : Ikaloyna
Sary fahatsiarovana niararahana tamin'ireo nandray anjara tamin'ny antsa
Zazangaly Irina Mpisorona
Narilala Ravakinoro Mero Kosiky
Joey Aresoa Ny Peniko
Ezra S Aina Nirina
Ireo mpakafy nanatrika